Ambohidrapeto-Itaosy: efa-bolana tsy misy famatsian-drano avy amin’ny Jirama | NewsMada
Ambohidrapeto-Itaosy: efa-bolana tsy misy famatsian-drano avy amin’ny Jirama
Sahirana amin’ny famatsian-drano ny mponina any Itaosy, distrikan’Atsimondrano, efa hatramin’ny ela. Tsy mahita vahaolana ny Jirama hatramin’izao. Tsy ampy, hono, ny rano, nefa ny vola tsy maintsy aloa ihany.
Efa-bolana izao, raha ny kaominina Ambohidrapeto manokana, tsy mahazo famatsian-drano ny mponina na indray mitete aza ! Amin’ny ankapobeny, ny mponina any Itaosy manontolo no mijaly rano, raha mba mandeha any amin’ny 1 ora maraina. Mahagaga ny mponina, raha ny avy ao Ambohidrapeto, mihodina ihany “compteur”-n’ny rano. Rehefa angatahana fanazavana ny teknisianina ao amin’ny Jirama, lazaina fa herin’ny rivotra no mampihodina ny “compteur”. “Koa mandoa volan’ny rivotra amin’ny Jirama izany izahay fa tsy ny rano”, hoy ireo mponina velon-taraina. Any an-tanimbary ny mponina no mantsaka rano, ankoatra izay mba manana vovo.
Manoloana izany, nanao fihetsiketsehana ny mponina teny Ambohidrapeto, omaly, nanome fe-potoana 48 ora ho an’ny Jirama hanarenana izao toe-javatra izao. Izao no vokatry ny tsy fisian’ny fikojakojana fotodrafitrasa hatramin’ny ela. “Tsy ny rano no tsy ampy fa ny Jirama, tsy nanavao ireo fotodrafitrasa nefa ny mponina mitombo ihany, koa tonga amin’izao toe-javatra mampalahelo izao, sady mbola hasaina mandoa volan’ny rano tsy misy akory izahay. Midika halatra tsotra izao izany ! ”, hoy ireo mponina any an-toerana.
Manamarina io tsy fisian’ny fanamboarana fotodrafitrasa io ny mpiasan’ny Jirama sasany, nefa tsy afa-manoatra koa izy ireo. Misy ny minisiteran’ny Rano eto, miampy ny minisitera miahy ny Jirama. Aoka mba handray andraikitra haingana izy ireo. Iaraha-mahalala fa iankinan’ny fahasalamam-bahoaka ny rano.